Liverpool Oo U Sharaxan Labo Abaalmarin Oo Waa Weyn Iyo Waqtiga La Bixin Doono Oo La Shaaciyay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Liverpool Oo U Sharaxan Labo Abaalmarin Oo Waa Weyn Iyo Waqtiga La...
Liverpool Oo U Sharaxan Labo Abaalmarin Oo Waa Weyn Iyo Waqtiga La Bixin Doono Oo La Shaaciyay
Liverpool ayaa ku dhow inay ku guuleysato abaalmarino kale marka magaalada Berlin ee dalka Jarmalka lagu qabto xaflada abaalmarinta caanka ah ee Laureus World Sports Awards bisha soo socota.
Koxoda ku guuleysatay Champions League islamarkaana xilli ciyaareedkan hogaamineysa horyaalka Premier League ayaa u sharaxan labo abaalmarin oo kala ah Kooxda Sannadka Iyo Soo Laabashadii Ugu Weyneyd Sannadka iyadoo abaalmarinta la bixin doono 17ka bisha Febraayo.
Reds ayaa 2-0 ku garaacday Tottenham finalkii Champions League ee lagu qabtay garoonka Wanda Metropolitano ee magaalada Madrid iyadoo Divock Origi iyo Mo Salah ay shabaqa soo taabteen.
Waxay Reds markaas ku guuleysatay koobkeedii lixaad ee Champions League.
Haatan Liverpool waxay 14 dhibcood ku hogaamineysaa horyaalka Premier League iyadoo isku diyaarinaya kulanka ay Axada la ciyaarayaan Manchester United – kooxda kaliya ee dhibco ka reebtay xilli ciyaareedkan horyaalka.
Liverpool oo ka soo kabsatay seddex gool oo lagu hogaamiyay lugtii hore islamarkaana garaacday Barcelona semi-finalkii ayaa waxa ay abaalmarinta Soo Laabashada Sannadka kula tartamayaan xiddiga Tenniska Andy Murray.
Previous articleWasiir Wehliye sheegay in Handaad lagu haayo Xildhibaanada cusub ee Galmudug
Next articleAl-Shabaab’s attacks come amid backdrop of West’s waning interest